Hlola iPort Moresby, iPapua New Guinea - World Tourism Portal
Hlola iPort Moresby, iPapua New Guinea
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili ePort Moresby, ePapua New Guinea
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ePort Moresby
Bukela ividiyo ngePort Moresby
Hlola iPort Moresby inhloko-dolobha nedolobha elikhulu kunayo yonke iPapua New Guinea. Idolobha lisogwini lweGulf of Papua. Inani labantu bakhona lizungeze i-300,000 futhi likhula ngokushesha. Abantu bomdabu bendawo yiMotu-Koitabu. IMoresby, njengoba yaziwa kaningi, yaqanjwa igama nguCaptain John Moresby owafika e1873 njengesivakashi sokuqala saseYurophu.
Umuzi usabalele impela. Indawo yokuhlala yangempela yamakoloni yayingasolwandle futhi le namanje kuyindawo echithwa kuyo, kanye nesifunda esikhulu sebhizinisi nesasebhange. Emagqumeni angenhla kuhlala izindlu eziphezulu. Le ndawo ihanjiswa yihhotela laseCrowne Plaza. Eduze kwesikhumulo sezindiza, ehlukaniswe nedolobha lasekuqaleni ngamagquma, yiWaigani, intuthuko yama1970 eyakhelwe ukufaka amahhovisi oHulumeni wezwe elisanda kuzimela ePapua New Guinea. Eduze kwendawo yezindawo zaseBoroko naseGordons, eziqukethe nezitolo ezinkulu eziningi.
IPort Moresby iphuzu eliyinhloko lokungena ePapua New Guinea ngokuhamba ngezindiza futhi iningi lesikebhe-traffic.
Ama-airfares avela Australia kushibhile impela, ikakhulukazi uma ubhuka online futhi ufuna omunye wemali ekhethekile. Kusuka kwamanye amazwe imali yokugibela ibiza kakhulu futhi kungabiza kakhulu ukuya eCairns futhi uthathe indiza eya ePort Moresby usuka lapho.
Kumvakashi, okuhehayo eMoresby kungasatshalaliswa. Kukhona 'ukukhangana' okuncane esifundeni samabhizinisi amaphakathi nokuhambahamba ngeke kukuthole kude. Kuhle ukuhamba nge-Ela Beach nasezindaweni ezizungezile zemakethe kodwa uma kungenjalo uzoncika kwezokuhamba ngezimoto.
Ama-ejensi wokuqasha izimoto ayatholakala eduze kwesikhumulo sezindiza iJacksons International kodwa ukushayela ePort Moresby kungenzeka kungeyona into iningi labantu abajwayele ukuyisebenzisa. Kwezinye izindawo ze-POM abantu bendawo bajikijela amatshe emotweni, imvamisa nje ngenjongo yokuzijabulisa kepha kwezinye izikhathi bayakwazi ukukhahlela isivalo sakho somoya. Kunamacala abantu abame phakathi nomgwaqo omude abawalungisile futhi afuna isinxephezelo kubantu abahamba ngemoto, uma nje ungena ngaphandle komuzi imigwaqo iwohloka emigwaqweni enodaka i-4 × 4 kuphela enolwazi umshayeli kufanele azame. Uma ufuna ukubona izinto eziseduzane naseMoresby ezinjengeCrystal Rapids eduze kwaseSogeri noma ukuqala kweKokoda, i-4 × 4 inconyelwa kakhulu.
IPort Moresby Nature Park (eyake yayibizwa ngokuthi yi-National Botanical Gardens) kufanele isivakashi. Itholakala eduze kweNyuvesi yasePapua New Guinea, inezibonelo ezithile ezinhle zezilwane zasendle zePNG ezinjengezinyoni zepharadesi, ama-cassowaries, ama-kangaroos esihlahla, izinhlobo eziningi ze-wallaby nezinye izinhlobo eziningi zezinyoni. Izingadi ezihlanzekile, ezishisayo nezigcinwe kahle. Ukuqhekeka okukhulu kusuka ezungezile ezomile, ezinothuli nokugcwala kwenhlokodolobha. Uma unenhlanhla ungahle ubambe umshado ngenkathi ukhona njengoba abanye bendawo bethanda ukuqhuba umcimbi ezivandeni.
EPort Moresby Golf Club Inkambo yegalofu enhle etholakala ngqo ezakhiweni zikahulumeni. Amanani amukelekile impela kubavakashi. Qaphela, izingwenya zihlala kuzimbobo zamanzi zegalufu. Isakhiwo esikhulu sinendawo yokudlela enhle lapho umuntu angaba khona nesidlo sasemini futhi abe nobhiya abambalwa be-SP (ubhiya waseNingizimu Pacific) ngemuva komjikelezo wegalofu.
Imakethe ye-Ela Beach Craft Eqhutshwa yi-Ela Murray International School futhi eyenziwa ngoMgqibelo wokugcina wenyanga ngayinye, le makethe ihlanganisa ndawonye izingcweti zasendaweni ezivela kulo lonke iPapua New Guinea. Indlela elula yokuthola imidwebo emihle, obhasikidi aboshwe ngesandla, noma ezinye zezinto eziningi zokuletha ekhaya njengezikhumbuzo.
I-Touaguba Hill Mhlawumbe ayiyinto eningi ukuyibona, kepha kulapho kuhlala khona izindawo zokuhlala ze-ambassadorial futhi kulapho iningi lezindawo ezihamba kahle nokwenza khona kuhlala khona. Kunombono omuhle ovela phezulu kwegquma elibheke enkabeni yedolobha nolwandle.
Indawo yaseMoitaka yasendle, iSir Hubert Murray Highway. Isakhiwo seMoitaka zasendle saseMoitaka manje sesivalwe ukuze sakhiwe kabusha.
Umkhosi weHiri Moale. Lokhu kwenzeka ngempelasonto ye-PNG's Independence Day maphakathi no-Septhemba. Indawo ephakathi nendawo ingumjaho wezikebhe ze-Lakatoi zendabuko ezifika ku-100, ukhumbula uhambo lwasolwandle olwenziwe ngabantu baseMotuan abavela endaweni yasePort Moresby abeshintshana ngayo izimbiza zodaka kanye nezimbiza zabantu besifundazwe esingumakhelwane seGulf. Ukuhamba kwesikebhe kusuka ePort Moresby's Ela Beach kuyamangaza ngempela. UMkhosi ungumbukiso wamasiko wedolobha omkhulu ngokudlala kwendabuko, kanye nezikebhe.
Ukuntweza emanzini. Inqwaba yezingodo nezibonda zisondelene nePort Moresby futhi ukugoba kungahlelwa ngemikhumbi yosuku noma esiQhingini iLoloata Island (esinezitolo zayo dive). Kuneziza ezahlukahlukene kanye nokujula kwawo wonke amazinga wesipiliyoni.
IPort Moresby ivule inxanxathela yayo yokuqala yezitolo ebizwa ngeVision City eWaigani. Kukhona i-hypermarket enkulu ebizwa nge-RH ethengisa noma yini kusuka kufenisha yasendlini kuya kubhontshisi obhaka. Ukuhlinzeka kwabo kuningi futhi ikhwalithi yinhle futhi amanani ancintisana. Okufanele kukhunjulwe umuntu ngukuthi yonke into engeniswayo kungenzeka ingahlali ikhona. Imvamisa uma ubona okuthile okuthandayo kufanele uthenge okuningi ngoba akukho okutshelwayo lapho kuthunyelwa okulandelayo. Lokhu akusebenzi ekudleni okuyisisekelo kepha ezintweni ezingase zingabi sidingo esikhulu njenge-herring. I-RH ivalile ngokuyisisekelo igebe leli.
Isiphuzo ozikhethele sona ePort Moresby njengakuyo yonke iPapua New Guinea yi-South Pacific lager: "ubhiya we-SP". Kodwa-ke, uma lokho isipiliyoni sesiko sekuqediwe, cishe uzothanda ukuqhubekela phambili kulabhulashi be-'Sport Export 'abenziwe ngcono, noma ubhiya ka-'Nugini Ice' Ukuze uthenge utshwala kufanele uye kwesinye sezitolo ezinemibala ephuzi neluhlaza evame ukuhlanganiswa ezitolo ezinkulu. Awufuni ukuya kokungekhona. Zinezinketho ezikhethiwe zewayini, iningi lase-Australia noma E-New Zealand imikhiqizo. Amanani aphakeme kunalokho obungakulindela ngenxa yentela yotshwala. Abantu bendawo bavame ukuba nomugqa omningi lapho bephuza (njengakuyo yonke indawo) ngakho-ke kungcono ukugwema noma ngubani obonakala ephethwe yithonya. Imvamisa iningi lama-expats liyaphuza emahhotela noma emishidweni yeklabhu yezemidlalo, enomoya opholile.
Njengoba kunezinto ezimbalwa ezikhangayo, i-Moresby imvamisa nje iyindawo yokumisa izivakashi iqonde kwezinye izingxenye ze-PNG. Uhambo losuku olunokwenzeka oluvela ePort Moresby lubandakanya:
ISogeri Plateau. Amakhilomitha angama-50 ukusuka ePort Moresby futhi, e-800m, ukuphunyuka ekushiseni. USogeri uphawula ukuphela komgwaqo iKokoda Trail, obekuyindlela enqamula ehlathini ethathwe amasosha aseJapan e1942 ngomzamo wokubamba iPort Moresby.
Isiqhingi sase-Yule. Isiqhingi esincane esiseduze nogu lweCentral Province, okuyihora elilodwa ukusuka entshonalanga nePort Moresby. Lokhu kungenye yezindawo zokuqala ze-PNG ukuxhumana nabantu baseYurophu. Izithunywa zevangeli ezingamaKatolika zahlala e1885. Bahlanganiswa nabatekisishi basePhilippines futhi ngenxa yalokho, abantu bendawo bavame ukuba nezici ezihlukile zasePhilippines. Yindawo ethandwayo yokuthola indawo yokuphumula nokudla kwasolwandle okuhle.